Aarthik Abhiyan:अंक समाचार
काठमाडौं (अस) । नेपालका ८ हजार ११६ हेक्टर क्षेत्रफलमा लसुन खेती हुने गरेको छ, जसबाट लगभग ५६ हजार ६६८ मेटन लसुन उत्पादन हुने गरेको छ । नेपालमा लसुन आयात करीब ६ हजार ९६४ मेटन हुने गरेको छ । चीनमा लसुनको प्रतिहेक्टर उत्पादन २७ दशमलव शून्य ९ मेटन प्रतिहेक्टर देखिन्छ । उक्त लक्ष्यलाई पछ्याउन सकेको खण्डम...
काठमाडौं (अस) । मुलुकमा मसी आयातमा वर्सेनि १६ प्रतिशतको बढिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै करीब रू. ९५ करोड बराबरको मसी आयात भएको छ । मुलुकमा छापाखानाको दिनानुदिन बजार बढ्दै गएको यस तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ । आर्थिक क्रियाकलापहरूको विस्तारसँगै भविष्यमा मसीको माग अझ बढ्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।...
काठमाडौं (अस) । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालमा करीब रू. २८ करोड बराबरको सर्जिकल पन्जा आयात भएको छ । विगत १० वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा सर्जिकल पन्जाको आयातमा करीब ३० प्रतिशतको औसत वार्षिक वृद्धिदर देखिएको छ । स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचमा हुने वृद्धिसँगै सर्जिकल पन्...
काठमाडौं (अस) । विगत मुुलुकमा फर्निचरको आयात दिनानुदिन बढिरहेको छ । गत १० वर्षको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा फर्निचर आयातको औसत वृद्धिदर वार्षिक करीब २४ प्रतिशत छ । नेपालमा हुने फर्निचर आयातमा भारत र चीनको भाग क्रमशः ४४ प्रतिशत र ४२ प्रतिशत छ । यी तथ्यांकले मुुलुकमा गुणस्तरीय फर्निचरको माग यथेष्ट रहेक...
काठमाडौं (अस) । विगत १० वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालमा पेन्सिलको आयात वर्षेनि औसत २९ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्रै रू. २६ करोडबराबरको पेन्सिलको आयात भएको छ । यस तथ्यांकले पेन्सिल उद्योगमा लगानीका सम्भावनालाई उजागर गर्दछ । सानो पूँजी, सहजै उपलब्ध प्रविधि तथा बढ्दो बजारका कारण...
काठमाडौं (अस) । मुलुकमा शहरीकरण, भूकम्पको जोखिम, सस्तोमा घर बनाउने चाहना तथा छोटो समयमा नै घर निर्माण गर्नुपर्ने लगायत कारणले प्रिफेब्रिकेटेड भवनको माग बढ्दै गएको छ । विगत १० वर्षको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा यी वस्तुको मागमा वर्षेनि करीब ४४ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ । विदेशबाट फर्केकाहरूको प्रिफेब...
काठमाडौं (अस) । मुलुकमा लाइटरको आयातमा वर्षेनि ३१ प्रतिशत वृद्धि भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै रू. ५८ करोडभन्दा बढीको लाइटर आयात भएको छ । नेपालमा करीब ९६ प्रतिशत आयात चीनबाट हुने गर्छ । कच्चा पदार्थका रूपमा ग्यास र प्लास्टिक प्रयोग हुने, फिलिङ गर्ने सामान्य मेशिनको प्रयोग गरी उत्पादन गर्न सकिन...
काठमाडौं (अस) । विगत ५ वर्षको प्रवृत्तिलाई हेर्दा नेपालमा सेनिटरी प्याडको किनबेच हरेक वर्ष करीब २४ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । शहर र गाउँ दुवै क्षेत्रमा सेनिटरी प्याडको प्रयोग बढ्दै गएकाले भविष्यमा सेनिटरी प्याडको माग अझ बढ्ने भएकाले यस उद्योग स्थापनाको सम्भावना राम्रो रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । वार्षिक...
काठमाडौं (अस) । विगत १० वर्षमा काइँयोको आयातमा औसत वार्षिक दर करीब १४ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालमा करीब रू. ६ करोड ३५ लाख बराबरका २ करोड ओटा काइँयो आयात भएको देखिन्छ । नेपालले आयात गर्ने काइँयोको प्रमुख आपूर्तिकर्ताहरू भारत र चीन रहेका छन् । यसरी वार्षिक रू. ६ करोड बराबरको काइँय...
काठमाडौं (अस) । मुलुकमा जुसको आयात वर्षेनि बढिरहेको छ । यसको औसत वार्षिक वृद्धिदर करीब ३३ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षमा रू. १ अर्ब ४० करोडको जुस आयात भएको थियो । यी तथ्यांकले मध्यम खालको जुस उद्योग स्थापना गरे मुलुक जुसमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । यसका लागि स्वदेशी जुस उद्यमीलाई करमुक्ति...